A otutu camcorders ndekọ .mod videos. Ụfọdụ n'ime ndị kasị ewu ewu camcorders dị ka Panasonic na Canon ndekọ vidiyo na a usoro. Nke a pụtakwara na edezi na vidio ndị a bụ mgbagwoju anya karịa edezi mp4 ma ọ bụ avi formats. Luckily maka anyị, e nwere ngwọta. A ọjọọ n'akụkụ bụ na ọ bụ a bit ihe mgbagwoju anya. Otú ọ dị, gị mkpa a obere omume na a ole na ole omume. Dị ka ị maraworị, otu n'ime ihe kasị ike omume maka edezi videos, na Mac kọmputa bụ iMovie. N'ụzọ dị mwute, ọ na-adịghị akwado .mod faịlụ. Ọ nwere ike na-emeghe ụfọdụ mod faịlụ, ma unu apụghị dezie ha.
Part 1: Olee mbubata mod ka iMovie on Mac
Part 2, ya mere otu mod video faịlụ-apụghị dị ka iMovie?
Dị ka e hotara na mbụ, a mod faịlụ-apụghị dị n'ime IMovie. Nke a pụtara na ị ga-enwe iji tọghata ya na a format na IMovie akwado. E nwere ọtụtụ, free, mmemme na internet nke ga-eme nke a. N'ụzọ dị mwute, nke a nwekwara pụtara na ị ga-mkpa ọzọ oge iji wuchaa gị oru ngo. The naanị, ọzọ ngwọta bụ ịzụta a camcorder na ike idekọ na ụfọdụ format na a na-akwado IMovie.
Otu n'ime ike omume maka edezi videos bụ Wondershare Video Converter Ultimate. N'ezie, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị Mmanu omume dị ka mma. Ị ga-ibudata ya na wụnye na kọmputa gị. E nwere free ikpe mbipute, ma o nwere ụfọdụ na-agaghị emeli, otú i nwere ike iji ya n'ihi na gị oru ngo. Wondershare Video Converter Ultimate Dị maka Mac na Windows kọmputa. E wezụga akakabarede, ọ na-enye ọtụtụ nke edezi atụmatụ na mmetụta. Ọzọkwa, ị nwere ike ibudata videos, kpọmkwem site omume na ọkụ ha na DVD. Ndị kasị mma atụmatụ nke Wondershare Video Converter Ultimate bụ:
Ọ dị nnọọ ngwa ngwa karịa yiri omume. Nke a pụtara na ị ga-mkpa obere oge iji wuchaa gị oru ngo.
Ọ nwere ike tọghata ọ bụla video ọ bụla format-amasị gị. Nke a na-pụtara na ị pụrụ tọghata .mod faịlụ na-emeghe ha na IMovie.
Otu click download a na-akwado. Ọ dị mfe iji.
Video akakabarede bụ ugboro 30 ngwa ngwa karịa ndị ọzọ omume.
Na-ere ọkụ DVD dị mfe ma ọ nwere otutu nhọrọ.
Olee otú iji tọghata mod faịlụ
1. Download na wụnye Wondershare Video Converter Ultimate. Mgbe ahụ, jikọọ gị camcorder na kọmputa na ẹkedori Wondershare Video Converter Ultimate. Ọ ga-akpaghị aka na-egosi na ego niile mod faịlụ gị camcorder. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ego ndị ị chọrọ iji tọghata na pịa '' Ibu Ibu ''. Ị nwere ike tinye faịlụ aka dị ka mma. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ịdọrọ na dobe ha n'ime usoro ihe omume. Ị ga-ahụ na ozi ndị ọzọ banyere ihe ndị a faịlụ. Ke adianade do, ị nwere ike ire ha na DVD dị ka mma.
2. Họrọ mmepụta usoro. Nke a bụ usoro nke videos mgbe akakabarede zuru ezu. Họrọ AVI usoro. Ọ bụ ihe kasị usable Ọkpụkpọ na IMovie ga-enweghị nsogbu mmeghe ndị a videos. The AVI format nwekwara nwere nnọọ ezi àgwà, ma ọ dịghị achọ a otutu ohere. Ndị ọzọ mmepụta formats dị ka nke ọma. Ị ga-ahọrọ a format na a ga-akwado site na ngwaọrụ ị na-aga na-egwu ya na ha. Ị nwere ọzọ nhọrọ dị ka mma. Ị pụrụ isonyere faịlụ niile n'ime otu faịlụ. Nke a bụ a bara uru nhọrọ mgbe ị chọrọ ka a nkiri. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ebe nchekwa, pịa atọ ntụpọ na ala nke window.
3. Mgbe ị na-eme, ị kwesịrị ị pịa '' Malite ''. Usoro a pụrụ ịdịru a nkeji ole na ole ma ọ bụ awa ole na ole, na-adabere size nke gị faịlụ. Mgbe mere, Wondershare Video Converter Ultimate ga gwa gị. Ị ga-ahụ otú ngwa ngwa a mmemme. Ọ na-ewe nanị minit ole na ole iji tọghata videos na nwere size nke ọtụtụ gigabytes. Adịghị ịkwụsịtụ usoro. Ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu, ya mere, gị na kọmputa reboot, ọganihu gị ga-efu na i nwere ike iji ndị faịlụ. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a na gị na laptọọpụ, jide n'aka na ọ na-plugged na, otú gị batrị apụghị igbapu.
4. Mgbe Wondershare Video Converter Ultimate wuchaa niile aga-eme, ị ga-ahụ converted faịlụ na ebe nchekwa. I kwesịrị ịma na ị nwere ike họrọ ebe nchekwa site onwe gị. Ugbu a, i nwere ike tinye faịlụ ka IMovie. Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa menu File na họọrọ Import-Movies. Ha ga-atụkwasịkwara usoro ihe omume. Ugbu a, ị nwere ike idezi ha na-azọpụta ha mgbe ị na-mere. Ugbu a, IMovie nwere ike idezi faịlụ n'enweghị nsogbu. Ị nwere ike ịgbanwe akụkụ ruru, tinye mmetụta na wdg na IMovie.
IMovie pụrụ imeghe .mod faịlụ. Ụfọdụ n'ime nnukwu camcorder emepụta eji mod usoro. N'ụzọ dị mwute, Apple ngwaọrụ adịghị akwado ya. Ọzọkwa, e nwere ndị mba ọtụtụ omume na ike imeghe mod faịlụ. A mod faịlụ bụ ụdị MPEG2 video faịlụ Ọkpụkpọ. Ọ na-adịghị ndammana-akwado site na Mac kọmputa. A ngwọta ya pụrụ ịbụ gbanwee faịlụ na M2V, otú a Mac kọmputa ike ịmata ya. A otutu mmepe na-enye ihe omume ha iji dozie nsogbu a, Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ha nwere flaws. Ụzọ kasị mma mbubata na dezie mod faịlụ na IMovie bụ iji tọghata ha na Wondershare Video Converter Ultimate na mgbe mbubata ha n'ime IMovie.
E nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ dezie mod faịlụ. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ n'ime ha na-adịghị arụ ọrụ nke ọma. Ị ga-atụfu oge na ego. Iji Wondershare Video Converter Ultimate bụ ndị kasị dịrị nchebe na ndị kasị nhọrọ. Ọbụna ọkachamara eji nke a usoro. Ị ga na-agbalị ya ma hụ otú ngwa ngwa ọ bụ. Ọ bụrụ na ị na-a rosh, Wondershare Video Converter Ultimate bụ nke zuru okè usoro ihe omume gị. Ọzọkwa, ọ bụghị oké ọnụ ma na ị nwere ike na-akwado ọ bụla ị chọrọ. Dị ka ị maara, ọ na-akwado site na Mac na Windows. Nbudata na wụnye ya dị mfe ma ọ dịghị achọ ọ bụla pụrụ iche na ihe ọmụma.
> Resource> iMovie> Olee mbubata mod ka iMovie